Mpanamboatra sy mpanamboatra rafitra fantsom-pifandraisana tsara indrindra modely | GOJON
Conveyor sy rafitra fikirakirana ambany mahomby ho an'ny orinasa baoritra mifono baoritra sy boaty baoritra. Amin'ny alàlan'ny fandrafetana ny zavamaniry iray manontolo, drafitra mirindra dia natao mba hahatsapana ny baoritra mandeha ho azy sy hampihena ny herin'olombelona sy ny loharanon-karena.
Ny rafitra mpampita fiara dia afaka mamaly ny takiana samihafa amin'ny baoritra mitazona ny sakany sy ny halavany. Ny sehatra mpandefa fehikibo modular, mpaninjara herinaratra fehikibo modular, turner mody XY turner, ary ny tsipika conveyor Auto dia azo noforonina araka ny hevitry ny mpanjifa. Ohatra, mpanamboatra iray izay manampahaizana manokana amin'ny famokarana baoritra, tsy mila manamboatra ny baoritra intsony, ary azo alefa ny baoritra aorian'ny fonosana, ary ny rafitry ny lozisialy dia tsotra ihany. Ireo antontan-taratasy avoakan'ny stacker dia ampitaina amin'ny dock maromaro amin'ny alàlan'ny fiara mpandahatra herinaratra. Ny mpiasa dia mameno ny fonosana baoritra eo amin'ny dock. Ny dingan'ny fitaterana manontolo ny stack dia azo vitaina mandeha ho azy na amin'ny tanana. Ny rafitry ny lozisialy mandeha tsara, avo lenta. Ho an'ireo mpanamboatra manana fahaiza-manao fanontam-pirinty ao amin'ny ozinina, ny baoritra novokarina dia nampitaina mivantana tamin'ny fizotry ny famokarana manaraka: fanapahana maty, fanontana, fametahana boaty, fametahana boaty ary fitehirizana. Mba hanamaivanana ny tsindry fitateran'ny paleta taratasy, ny mpamokatra toy izany dia mila mamolavola ny lozisialy zavamaniry iray manontolo.
Rafitra mpampita baoritra manan-tsaina
1. mampihena ny vidin'ny asa
2. Fandidiana fanamorana
3. Fahafaham-po ny filan'ny famokarana sy fitantanana ny orinasa maoderina
Rafitra mpampita amin'ny faritra buffer
Miaraka amin'ny fanatsarana ny kaomandy fividianana sy ny fanavaozana ny hafainganam-pandehan'ny tsipika, ny fomba fitahirizana efa misy dia tsy afaka manome fahafaham-po ny fangatahan'ny fahaizan'ny famokarana. Na izany aza, ny rindrambaiko GOJON dia manitatra ny habaka fitehirizana, mampihena ny vidin'ny fitaterana, manatsara ny fahombiazan'ny asa, miantoka ny fahadiovana sy ny filaminana ao amin'ny atrikasa ary mamela ny habaka fitahirizana voafetra hamorona lanja tsy manam-petra.
Ny famahanana sy ny fividianana amin'ny faritra fanodinana
Ho valin'ny fanavaozana tsy tapaka ny milina fanontam-pirinty sy ny milina manapotika, ny rafitry ny mpampita GOJON dia namaha ny olan'ny havizanana amin'ny fikirakirana ny olombelona sy ny fahombiazan'ny fampitana ambany, Mba hahatonga ny fitaovana fanodinana hampivelatra ny fahaizan'ny milina fanontana sy ny milina manapaka maty, mahatsapa ny fandidiana manan-tsaina eo amin'ny faritra fanodinana.
Teo aloha: Laharan-jaza marani-tsaina laminating tokana
Manaraka: Rafitra fitaterana Auto Paper Roll
Mpanatitra fehikibo Module
Carte Conveyor, Erp Banking, Masinina maranitra ho an'ny fonosana taratasy, Efijery fiasan'ny atrikasa, Roller Conveyor Systems, A3 Taratasy fampirimana,